Arfiiwwan baaqee dhangeessuuf, Akkaataa Arfii ykn guutuummaa jechootaa fi murnadubbii fayyadami. Yoo barbaaddee, Akkaataawwan Arfii wal-keessa naquu nidandeessa.
Keewwatoota akaakuu bocquu fi hammamtaa dabaalate dhangeessuuf, Akkaataawwan Keewwataa fayyadami. Akkasuumas akkaataa keewwataa, keewwata itti aananiif fayyadamuu nidandeessa.
Barruu fi goodayyaawwan saxaatoo dhangeessuudhaaf, Akkaataawwan Goodayyaa fayyadami.
Caasaa galmee, akkasuumas lakkoofsawwan fuulaa ida'uu qindeessuudhaaf, Akkaataawwan Fuulaa fayyadami. Akkasuumas Fuula jalqabaa isa xumuura fuulaa boodatti ittaanan irratti fayyadamuuf, akkaataa fuulaa ifteessuu nidandeessa.
Halqara ammaatti akkaataalee isa qajeelaa agarsiissa.
Akaakuu akkaataa ka'aa dhaaf, akkaataalee mara agarsiissa.
Galmee ammaa keessatti fayyadamaa akkaataalee (kan Akaakuu filatamee) agarsiissa.
Akaakuu akkaataa filatamee keessatti akkaataalee hiika fayyadamaa agarsiissa.
Barruuf Akkaataawwan dhangeessuu agarsiissa.
Matadureef akkaataalee dhangeessuu agarsiissa.
Kasaaleef akkaataalee dhangeessuu agarsiissa.
Akkaataawwan dhangeessuu; irraantoota, jalaantoota, ibsoota dabalataa, gabateewwan, akkasumas ibsadureewwanii agarsiissa.
Galmeewwan HTMLf tarree akkaataalee tokko agarsiissa.
Akkaataawwan otoola hiika fayyadamaa agarsiissa.
Tarree sadarkaawaa tokko keessaa akkaataalee akkaakuu filatame keessatti agarsiissa. sadarkaa xiqqaa tokko keessatti akkaataalee mul'isuuf, maqaa sadarkaa xiqqaatti isa aanee jiru mallattoo idaatii (+) irra cuqaasi.
Title is: Haalataawwan Barreessuu